Ukudla nokunakekela - iSearch
Phakathi nenkathi yokukhulelwa uye kabanzi asebenzelana ngayo udaba "ibele" wafika ezimweni eziningi esiphethweni sokuthi kwakungeyona wokwaba. Kodwa kuthiwani uma injongo enenhloso enhle ingasetshenziswa? Izizathu zalokhu zingabaningi futhi ziphazamise omama abaningi abasha abangazange babhekane nenye indlela yokuncelisa ngesikhathi sokukhulelwa. Kungani? Phela, isinqumo sesivele senziwe isikhathi eside.
Hhayi nje Ukubeletha futhi ngaleyo ndlela imisiwe ubisi ejection Zingaphazamisa ibele, nezinkinga yokudla ngenxa wazalwa kungakabi isikhathi noma ezinye izizathu engase yokwakheka, kungaba izinkinga ibele noma kungenzeki nhlobo. Izibhedlela eziningi ziye zabhekana nabeluleki bebeletha abasiza umama omncane ngezinye izindlela ezifana nepompo noma i-cap cap. Khona-ke omunye uzama ngokwemvelo ukukhuthaza ukukhiqizwa ubisi noma ukunqoba ubuthakathaka bokuphuza usana. Kulo mama osemusha, lesi simo sivame ukucindezeleka. Ngoba kufike umuntu mumbe ngengqondo njengoba uyayikhathalela inhlalakahle ingane noma abahlushwa yokuzingabaza, ngokwenyama ngakolunye uhlangothi, kusukela yokudla njalo exhunywe kwi-ukudonsa phakathi nesikhathi esifushane isikhawu ngemva nje kokuzalwa kuyinto ukuzikhandla eqinile emzimbeni. Khona-ke isinqumo okwesikhathi ukudla esikhundleni kumelwe bawe ngaphansi kwezimo ezithile - isinqumo ukuthi engenakuqhathaniswa nzima ngaphansi kwethonya ekonakaleni okusheshayo amahomoni sokukhulelwa futhi ukuthi lokhu kudala imizwa yethu ishintshashintsha kusukela kwenjabulo lusizi lokufa lungcono kungaba kunjalo vele.
Ngaphezu izinhlobo ezahlukene ubisi esikhundleni, ezifana pre-amafomula - hypoallergenic noma probiotic, okuhloswe ngaso zokunciphisa colic noma Reflux, in ifomu powder noma njengoba ubisi eseqedile - likhona ukuhweba ububanzi cishe ibanzi imikhiqizo ibele ezifana ingono isihlangu noma ukuncelisa ephefumulelwe ukuncela izinkomishi, amabhodlela kanye Ama-Pacifiers ahloselwe ukuvimbela ukubeletha ngaphambi kokubeletha. Ububanzi besifuba bubuye bubanzi: Ngaphandle kwamaphampu ahambayo, ama-electrical atholakalayo ngesicelo esisodwa noma esisehlangothini esisodwa. Kungakhathaliseki ukuthi ukukhetha manje kuwela epompini lesifuba noma ukudla kwezingane kufanele kunqunywe ngabanye futhi, uma kunesidingo, ngosizo lomxhumanisi wokuncelisa ibele noma ochwepheshe bezokwelapha. Kodwa ngezinye izikhathi kunezizathu ezidumile kakhulu zokuvumela umama asebenze epompini lesifuba noma esikhundleni sokudla. Isibonelo, uma ngezizathu zobuchwepheshe ukuzimela ngokwengeziwe ekunceliseni ibele kuyadingeka.
Ubunzima kokuqala, abazali babazukulu ngilinqobile ngosizo nombelethisi ngokushesha, kodwa indlela kuleli hlathi umkhiqizo ngokuqhubekayo uyaqhubeka kuze Ukudla ezimele: On emashalofini ulandele-ku ubisi izinkomba ezahlukene nengane ubisi inqwaba. Ngaphandle kwemishini for lokuhlanzisisa amabhodlela kanye pacifiers nge umusi yokupheka ukuze alungiselele Breinahrung lokuqala noma microwave-ephephile, ingane isikhohliso lokushisa nesilinganiso, emabhulashini, isikelo izipanji nezilwane Yiqiniso, abesesula, okhilimu kanye lotions ...
Ochwepheshe bethu balwe ngokusebenzisa umkhiqizo womkhiqizo futhi baqhathanisa imikhiqizo ehlukene. Imiphumela yethu ingatholakala lapha.